Kungani uLuz de Maria de Bonilla? - Ukubalwa phansi kuya eMbusweni
Ngemuva kweminyaka eminingi yokuzinikela entandweni kaNkulunkulu, uLuz de María waqala ukuzwa izinhlungu zesiphambano, azithwala emzimbeni nasemphefumulweni. Lokhu kwenzeke okokuqala, wabelana, ngoLwesihlanu omuhle: “INkosi yethu yangibuza ukuthi ngifuna ukubamba iqhaza ekuhluphekeni Kwayo. Ngaphendula ngokuqinisa, kwathi emva kosuku lokuqhubeka komkhuleko, ngalobo busuku, uKristu wabonakala kimi esiphambanweni wahlanganyela amanxeba Akhe. Bekubuhlungu okungachazeki, yize ngiyazi ukuthi noma kubuhlungu kangakanani, akubona ubuhlungu obuphelele uKristu aqhubeka nabo ukuhlupheka ngenxa yesintu. ”
Imilayezo evela kuLuz de Maria de Bonilla
ILuz de Maria - Isifo Esisha Sizofika
Ukubuyela kokujwayelekile akuyona iqiniso lakho.
Luz de Maria - Ubukhomanisi buyaqhubeka
ULuz de Maria - Ekulawuleni Izingqondo
Ubuchwepheshe obusha obuthinta ingqondo ...
... silungiselela ubuntu bokucela ngokuzithandela uphawu lwesilo.
Luz de Maria - Isivuno Siyasondela
... hhayi ukwahlulelwa kokugcina kwezizwe, kodwa kwalesi sizukulwane.
Luz de Maria - Ukukhipha Isisu Ubugebengu
Ngabe ubona sengathi ukugcwaliseka kwesiprofetho kukude kakhulu?
Luz de Maria - Gcina Amalambu Akho Avutha
Ngikubiza ukuthi ube yingxenye yeNsalela eNgcwele.
UJesu Kristu ucela ukuthi le Triduum yomhlaba wonke inikelwe ngoDisemba 12 ku-Our Lady of Guadalupe
UJesu Kristu ufisa ukungcweliswa emhlabeni wonke ngoDisemba 12 ...
Okuningi ku-Shaking Great ...
Ukuqhaqhazela okukhulu okuvezwe yilo Mama kuza ...
... zihola ubuntu kumphikukristu.
Luz - Inkungu Eminyene
Ububi budlangile phezu kwesintu.
Luz de Maria - Yenza Ukulungiswa Namuhla
Ungahlali ungenzi lutho.
Luz de Maria - Ungalindi
Izinsalela zami eziNgcwele ziyakhethwa.
... kulokho okumi esangweni.
Luz de Maria - Ukuhluza Ukolo
Luz de Maria -Ukuhlanzwa Kobuntu Kuyashesha
Zilungiseleleni! Okuzokwenzeka kuzobekezeleleka kangcono kumuntu uma ehlala kuNkulunkulu ...
I-Luz de Maria - Indalo uqobo lwayo Isebenzelana Nomuntu
Ngakho-ke lowo muntu wayezobuyela kuNkulunkulu futhi amazi.
Luz de Maria - Impilo Ngeke Iphinde Ifane
Ungesabi: wonke amabutho asezulwini alindile
ILuz de Maria - Ubuntu buqhubeka ngaphandle kokuzibona izimpawu
Uthando lukaZiqu-zintathu lubumba umcimbi omusha
Luz de Maria - Ungesabi, Noma Ububi Bulele
Angikutsheli ngokuphela komhlaba, kodwa ukuhlanjululwa kwalesi sizukulwane.
Luz de Maria - Yiba Uthando
Uthando lweNdodana yami kufanele lubonakale ezinganeni Zami zeqiniso.
Luz de Maria - UDeveli Ungene Esontweni
Uzithola ngesikhathi esabikezelwa: ukugcwaliseka kwezambulo.
Luz de Maria - Hlala Uqaphile Ngokomoya
Izifo, izifo eziwumshayabhuqe nezifo eziwumshayabhuqe, ezingagcini ngokulimaza umzimba, kodwa nomoya, ngeke zime.
... ukuhlangana kwakho nale engikuprofetele isintu.
Kuyadingeka ukuthi Umama Wami amukelwe njengoMama weSintu, i-Co-redemptrix ne-Mediatrix yazo zonke izinhlaka.
Luz de Maria - UJesu Akasoze Akushiye
ULuz de Maria - Izimvu phakathi kwezimpisi
INkosi yethu kuze kube ngoJuni 13, 2020: Bantu Abathandekayo: Qhubeka endleleni yokuguquka. Hlala othandweni lwami, ...
Phikelela, ungathathi kalula amazwi eZulu.
ILuz de Maria - Izilingo Ngeke Zilibazise
Hlala uthembekile ngaphezu kwakho konke okunye.
Luz de Maria - Impendulo
Ingabe "amagunya ezempilo angaphezu kukaNkulunkulu"?
I-Luz de Maria - Ubuhlanya Bomuntu buyabhekana
Le mpi iholela empini yomhlaba.
Luz de Maria - Zibone Izimpawu Zezikhathi!
Melana 'negagasi lemibono' ...
Luz de Maria - Isexwayiso Sisondela
Thandaza, njengoba isenzo soMusa Wami useduze nobuntu ...
Luz de Maria - Ukubusa Ngokusaba
Kuhlelwe isu likaMasonic ukuze kubuse ubuntu ngokwesaba.
Luz de Maria - Lesi Isikhathi Esingenasikhathi
Lesi yisikhathi akusona isikhathi ...
"Izithelo zabo zisetshenziselwa ukudla, namaqabunga abo ukwelashwa." (UHezekeli 47:12)
Luz de Maria de Bonilla - Thandaza Ngokulwa Namagciwane
I-Lady yethu eya, ngoMashi 15, 2020: Bantwana abathandekayo beNhliziyo Yami Engaqondile: Nginibusisa ngalesi sikhathi lapho ubuntu ...
ILuz de Maria de Bonilla - Izintaba-mlilo Ziyazihlanza
ISt. Michael Ingelosi enkulu Yokuthi: Bantwana, ubuntu bazomangala ngokufutheka kwezintaba-mlilo namanje okungaziwa. Umuntu uzophinda futhi ...
← Kungani uValeria Copponi?
Kungani uSimona no-Angela? →